iPhone 5s - Famerenana sy fanadihadiana video | Vaovao IPhone
Famerenana sy fanadihadiana momba ny iPhone 5s
Pablo Ortega | | iPhone 5s, Fantson'ny IPhone
Androany tonga amin'ny andiany voalohany amin'ny firenena ny iPhone 5s. Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, ao amin'ny Actualidad iPhone izahay no voalohany mitondra anao ny iPhone 5s mandinika horonantsary amin'ny teny Espaniôla. Ato amin'ity horonan-tsary ity dia asehonay anao ny fiasa fototra an'ny iPhone 5s ary hazavainay ny vaovao momba ny fitaovana sy rindrambaiko. Betsaka ny zavatra azo amakafakaina momba an'ity telefaona ity, koa araho ao amin'ny tranonkalantsika afaka ora vitsy satria hamoaka horonan-tsary izahay izay hanehoanay anao amin'ny antsipiriany bebe kokoa ny vaovao rehetra.
Androany dia hivoaka koa ny iPhone 5c ary hasehonay anao amin'ny famerenana horonantsary iray hafa ao amin'ny iPhone News ity. Manomboka amin'ny Famerenana iPhone 5s.
Miatrika telefaona mitohy izahay manoloana ny teo alohany, ny iPhone 5, fa miaraka amin'ny fanovana ho amin'ny tsara kokoa. Amin'ny haavon'ny famolavolana mahita maodely vaovao roa isika: volondavenona sy volamena habakabaka, izay manampy ny fotsy nentim-paharazana. Marina fa ny iPhone 5s loko volamena Tokony ho hitanao manokana izany mba hankafizanao ny famaranana lehibe. Ny singa tokana nohavaozina dia ny bokotra an-trano, izay misy ankehitriny ny sensor fanamarinana ny dian-tànana sy ny fakantsary, izay manome LED vaovao. Ny efijery dia mijanona eo amin'ny efatra santimetatra.
1 ID ny famandrihana
2 iOS 7 amin'ny iPhone 5s
ID ny famandrihana
Raha vantany vao ampodinao ny iPhone 5s, dia ampirisihinay hanavao mankany amin'ny iOS 7.0.1, manamboatra bibikely rehefa mampiasa Touch ID hividianana ao amin'ny App Store. Touch ID dia ahafahanao misoratra amin'ny dian-tànana marobe amin'ny alàlan'ny dingana tsotra iray izay angatahana aminao hanangana sy hametraka imasonao imbetsaka. Amin'ireo fitsapana rehetra nataontsika dia tsy nahita lesoka izahay. Izy io dia miasa tanteraka ary azo antoka kokoa noho ny manana teny miafina sy haingana kokoa.
iOS 7 amin'ny iPhone 5s
Ny résolution 8 megapixel dia voatazona, fa ny haben'ny solomaso kosa dia nitombo mba hahatonga ny piksel ho lehibe kokoa ary, noho izany, ny sary dia manana kalitao avo kokoa. Izahay tokoa dia nankasitraka ny fanamboaran'ny fakan-tsary ny haavony ho azy sy ny fanatsarana ny fakana sary amin'ny hazavana ambany. Ny maody Burst dia manaitra amin'ny fahitana azy any am-piasana, ary mihetsika miadana, amin'ny zana-kazo 120 isan-tsegondra, dia hiantoka fotoana mahafinaritra. Ireo fomba roa ireo dia natokana ho an'ny iPhone 5s.
Rehefa milaza izy ireo fa ny chip A7 dia avo roa heny noho ny A6 ao amin'ny iPhone 5 dia tsy mandainga izy ireo. Milamina kokoa izao ny fitetezana ny iPhone, ary raha hijery ny fomba fiasan'ny chip 7GHz A1,7 amin'ny voninahiny rehetra, ampiasao tsotra izao ny fomba fandroahana fakan-tsary.
El iPhone 5S efa misy any Etazonia izao amin'ny vidiny ambany $ 199, miampy hetra miaraka amin'ny fifanarahana roa taona. Any Espana dia hanana vidiny maimaim-poana 699 euro izy, saingy mbola tsy fantatsika hoe rahoviana no halefa ny terminal.
El iPhone 5s loko volamena mifanohitra amin'ny iPhone 5 fotsy:
El iPhone 5s ao amin'ny Space Gray:
Fanazavana fanampiny- Mendrika ny mandeha amin'ny iPhone 5 ka hatramin'ny iPhone 5S?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 5s » Famerenana sy fanadihadiana momba ny iPhone 5s
adfa dia hoy izy:
"Any Eropa dia hanana vidiny maimaim-poana 699 euro izy io, saingy mbola tsy fantatsika hoe rahoviana no halefa ny terminal." WTF?!?!?! Efa navotsotra tany Alemana sy Frantsa izy io, ankehitriny dia tsy Eoropeana intsony izy ireo ... mila manoratra zavatra amin'ny fahalalana ianao ...
Mamaly ny adfa
satria tapaka ny horonantsary ary tsy mitohy? Rahoviana ianao no hampakatra ny video manaraka? Mila kalitao be dia be izay ananako fakan-tsary vaovao ary indrindra ny fomba fanokafany ireo pejy safari.
Pablo_Ortega dia hoy izy:
Andramo indray. Tokony ho feno tanteraka izao izao 😉
Mamaly an'i Pablo_Ortega
Ho hitanao indray ary minono indroa ny publi NOKIA lol.
Genessis Jimenez ⚽ dia hoy izy:
Andriamanitra, tsara tarehy tokoa io lamina volamena io.
Valio amin'i Genessis Jimenez ⚽
ratsy dia hoy izy:
Ratsy ny tsikera, toa mpankafy… »APOL»
Sers84 dia hoy izy:
Fanontaniana iray ... ary kely no novakiako momba ny fanoherana ny bokotra vaovao ... izany hoe, ny bokotra itouch vaovao dia mahatohitra na mora tohina ... ary ianareo izay manana izany eo am-pelatanany ... ahoana ny fahatsapany ny mikasika ??? toa ho tapaka io sa ahoana ??
Valiny amin'ny Sers84
Ny mikasika dia mitovy amin'ny mahazatra ihany. Aloha ny miresaka momba ny fanoheranao.
Misaotra! =) Hanaraka amin'ny antsipiriany izay ataonao aho!;)
apol dia hoy izy:
Pablo, manana ampy izahay amin'ny fihainoana anao hahita anao bebe kokoa noho ny amin'ny telefaona.
Tsy ilaina koa ny mozika turbo-sheet 10 avo heny noho ny feon'ny feonao.
Ho an'ny famerenana amin'ny ho avy dia manandrama minono tsy fakan-tsary kely ary ahodino tsara ny horonantsary, na avelao any amin'i Gonzalo ilay hevitra.
Tsy misy fanafohezana.
Mamaly an'i Apol
VY dia hoy izy:
Tsy misy manery anao hihaino ny podcast na ny famerenana.
Mamorona bilaoginao manokana ary manazàra anay «sary» fa «endrika» ianao
Tsy misy fanafohezana… ..;)
sh4rk dia hoy izy:
Nieritreritra an'io zavatra io ihany aho teo am-pijerena azy. Ary koa, ny famafana amin'ny lamba vovoka alohan'ny hamonoana ny akaiky azy dia tsy hevitra ratsy ihany koa.
Ary tsy misy fanafohezana, fantatro tsara ilay asa ary fantatro fa ny firaketana sy ny fanovana horonantsary WELL dia sarotra kokoa noho ny fahitana azy voalohany.
Mamaly an'i sh4rk
SCORPONUS dia hoy izy:
Finday tafahoatra, IOS7 ny dika android lehibe indrindra hitako tamin'ny fiainako fa tsy mandatsaka ny tontonana hampiasana wifi sy ny hafa, fa raha tsara ny finday nefa ny paoma efa may mandrehitra ...
Valiny amin'i SCORPONUS
Azo antoka fa adala mahantra ianao izay zara raha vao herintaona miaraka amin'ny smartphone, ary azo antoka fa Android satria tsy manana iPhone ary efa mieritreritra ny fahafantaranao azy rehetra.
Inona no resahinao momba dadatoa, ianao lehilahy adala mahantra na inona na inona, manana taona maro miaraka amin'ny finday avo lenta noho ianao azo antoka fa eto irery no «olona adala mahantra» dia ianao, izay azo antoka fa ianao dia iray amin'ireo mihinana ny churra of apple na dia raha mahazo korontana aho, soa ihany toa an'ity Firenena ity aho afaka mividy iPhone na inona na inona, fa ny telefaona iray € 700 izay tsy mitentina antsasaky ny fisiany noho ny fisehony, miala sasatra ianao, amin'ny alàlan'ny tanako ny zavatra rehetra dia nandalo ny iPhone 3g, 3gs , 4, 4S ary 5 izay tato ho ato dia afaka nanandrana aho ary namela ahy ilay fahatsapana mitovy amin'ny htc iray S, na ny tompony aza te hanova azy io ho an'ny finday hafa satria efa leo azy izy ka amin'ny manaraka mihinana ny teninao sy ka tsy manao ny ***** ...
Moises Alvarez Rodriguez dia hoy izy:
Tena mahamenatra tokoa fa ny finday iray amin'ny taona 2010 dia mamafa ny fari-pitsipika rehetra mankany amin'ireo finday misy core 4 ...
Valiny tamin'i Moisés Alvarez Rodriguez
Izany dia raha tsy mandeha tsara ny finday misy 4 ″ sy ny vahaolana 1.136 x 640 teboka miaraka amin'ny sary ananany, vonoy ny jiro ary andao handeha, ny finday hafa dia mamindra ny fanapahan-kevitra fullHD 1920 × 1080 ka ireo benchmarks ireo dia tsy mandeha maneho ny zava-misy na dia amin'ny iphone na amin'ny finday aza.
Ny fitsapana dia atao TANORA handinihana ny efijery na ny vahaolana, ny sary manokana ihany no mampiasa azy, ka ny fialan-tsasatra amin'ny haben'ny efijery sy ny famahana dia TSY misy fampiasana. Nasehon'ny fitsapana fa mikapoka ny terminal Android rehetra eny an-tsena izy, manaikitra izay mangidihidy
sergio loza dia hoy izy:
Ary ianao dia iray amin'ireo olona izay raha manana iPhone dia mieritreritra fa manankarena izy ireo ary manana izany fotsiny noho ny toerana misy azy ireo
Mamaly an'i sergio loza
Raha miteny amiko ianao dia tsy mieritreritra an'izany aho noho io fitsipiky ny 3 io raha mahita olona manana HTC One aho dia hieritreritra ihany koa aho fa manankarena arak'izay lazainao, tsy izany no ezahiko lazaina, inona Ny tiako holazaina dia hoe finday tena lafo vidy amin'izay entiny, toa mahafinaritra ahy izany nefa tsy avelako hisosa.
KyrosBlanck dia hoy izy:
Malahelo izany choni izany Heveriko fa maodely xDDDDD Mazava ho azy, fotsy fotsy .. maninona no paoma?, Maninona?! D: Ho hitanao, leoparda iPhone 6 tsy ho ela
Mamaly an'i KyrosBlanck
Choni ??? original .. Cool .. Stately .. Luxury .. Beauty .. Mahagaga !! Raha faritana ny faha-5 dia io no terminal tsara tarehy indrindra navoakan'ny paoma ary tonga ianao milaza fa avy amin'ny choni? Azafady .. fantatro fa tamin'ny hatsikana no nilazanao azy .. Nefa aza atao vazivazy akory izany.
Hey, herintaona na lasa izay dia nividy ny iPhone 5 efa ho 700 dolara aho, azafady. Tsy misy turkey, euro lafo kokoa. Ary izao dia navoakany ny 5s !!!
Ny bilaogy rehetra dia manolo-kevitra ny hanovako satria zava-dehibe ny vaovao: sary tsara kokoa, mamaky ny dian-tananay ary misy loko vaovao. Manantena an'izany aho, tsy andriko ny hivoahany any Espana. Fiovana lehibe, eny tompoko.
Em TSIA. Etsy ankilany, ny loko volamena dia laharam-pahafatesana.
Toa tsy dia ambony loatra tamiko ilay famerenana, na tena hoe vitsy dia vitsy ny vaovao. Ios7 dia toa fanavaozana tsara dia tsara, efa herinandro no nampiasako azy tao amin'ny ipad2, ary tsy manadino ny jailbreak intsony aho, antsipiriany kely maro izay mahatonga ny iOS ho tsara kokoa noho ny taloha. Ho an'ireo izay milaza fa izany dia dika amin'ny Android, tsara kokoa ny tsy mamaly ... Manahaka an'i Apple amin'ny zavatra rehetra ny olona, ​​na amin'ny fampisehoana aza, amin'ny dokam-barotra, ary rehefa mandray zavatra "ilaina" izay notakian'ny olona infintio ... dia izy ireo ve kopia, amin'ny farany ... Raha ny traikefan'ny mpampiasa dia Apple no faharoa. Nifindra tany amin'ny Samsung S4 aho, satria mandra-pahatongan'ny Apple tsy manana efijery izay tsy natao ho an'ny tanan'ny ankizy dia kely loatra amiko. Angamba 5 ″ dia betsaka, fa ireo 4 sandoka amin'ny telefaona tery toy izany dia tsy maharesy lahatra ahy. Ary i Samsung dia hanana octacores sy tantara, ahazoana isa marobe amin'ny benchmarks fa avy eo dia tsy voatsara tsara ny fampiharana ary misy ny manafintohina ny sasany. Rehefa mamoaka iPhone 6 izy ireo, ary manana efijery "XL", dia eny. Ny sensor sensor dia toy ny sensor an'arivony amin'ny S4, mamantatra ny farts amin'ny tontolo ... tsy ilaina.
Salama maraina Pablo! Omaly alina aho dia nieritreritra zavatra nolazainao tamin'ny fanadihadihana nataonao… hoy ianao fa mampiditra ny haitao hifehezana ny haavon'ny ambiny? Inona no tianao hambara? tsindry, hafanana ary hamandoana? ahoana no tsy namakiako azy taloha ... azonao lazaina amiko ve izany?
Amin'ny haavo hazavana amin'ny toerana, ny fifandanjana fotsy ...
RastaKen dia hoy izy:
Blackberry Messenger dia efa navotsotra tao amin'ny New Zealand Store, milanja 29,2 Mb !!
Mamaly an'i RastaKen
IPhone News Request dia hoy izy:
Ry mpamaky malala, efa maro amintsika no nahatsikaritra ny fihetsika tsy mendrika ananan'ny tonian-dahatsoratry ny Actualidad iPhone. Heveriko fa tahaka ahy, betsaka ny manantena fa ity bilaogy ity no izy taloha. Ny fomba tsara indrindra hampielezana vaovao momba an'i Apple sy ny fihenany tato ho ato.
Amin'ny alàlan'ity lahatsoratra ity dia tiako ny mangataka ny fanohanan'ny tsirairay amin'ny fanamarihana tsara na amin'ny fanehoan-kevitra mitovy amin'izany, mba samy hahafantatra i Pablo sy ny tonian-dahatsoratra hafa fa tsy tianay hianjera ity tranonkala ity, manohana azy ireo izahay ary mahatoky amin'izy ireo fa ny kalitaon'ny atiny no tadiavinay.
Izany no antony anaovantsika ity fangatahana an'i Pablo Ortega ity mba hanao horonantsary vaovao momba ny iPhone 5 miaraka amina atiny azo tsapain-tanana, miorina amin'ny zava-misy fa tsy amin'ny fiheverana, izay teoria (raha marina) no lazain'izy ireo eto.
Mangataka ny fanohanan'ny mpamaky rehetra ao amin'ny Actualidad iPhone aho, mba ho fantatr'ireo tonian-dahatsoratra fa tianay ny asany, saingy tsapan'izy ireo ny hadisoana ataon'izy ireo, ny fiahiantsika ny tranonkala ary tianay hatsaraina izany.
Mamaly ny fangatahana iPhone News
Tsy ilaina ny fitsikerana manimba, raha tsy tianao ny zavatra hitanao dia lolo hafa. Tsy tiako ny fivoaran'ny tontolon'ny fanehoan-kevitra, feno troll izay miteny na inona na inona amin'ny fiarovana ny tsy fantatra anarana.
Mazava ho azy fa mety ho tsara lavitra kokoa ilay horonantsary. Saingy izy ireo no napetrak'izy ireo taminay ary tena faly aho mahita ny telefaona eo am-pelatanan'ny olona iray izay mamoaka amin'ny bilaogy iray izay hajaiko ary ny hevitro no tiako.
Miarahaba an'i Pablo ary manohy mampahafantatra.
Martin abbot dia hoy izy:
Lahatsary mahafinaritra, misaotra anao nametraka azy
Mamaly an'i Martín abad
Amin'Andriamanitra izany dock !!! Hiverina amin'ny iOS voalohany io, zavatra mahatsiravina tokoa. Izy io koa dia manaisotra ampahany betsaka amin'ny vola ananantsika.
Manantena aho fa amin'ny kinova nifandimby na efa tao amin'ny iOS 8 dia novain'izy ireo izany dock izany satria tsy tokony ho mahatsiravina kokoa izany.
Ahoana ny fomba hitsitsiana bateria ao amin'ny iOS 7